थाहा छ ? महिलाहरू पुरुषका यी ५ ‘अंग’ देखेपछि भुतुक्कै हुन्छन् !
एजेन्सी – महिला र पुरुष एकअर्काप्रति आकर्षित हुने प्राकृतिक नियम नै हो । जीव विज्ञानअनुसार महिला र पुरुषको म स्तिष्कमा विपरीत लि/ङ्गीप्रति आकर्षक गर्ने गुणहरु हुन्छन् त्यसैले गर्दा बिपरित लिं/गीप्रति अाकर्षण हुन्छ ।
तसर्थ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकअर्काप्रति आकर्षित हुने सामान्य मान्नुपर्छ । पुरुष र महिलाको प्राथमिकता भने फरक हुन्छ । पुरुष र महिलाका लागि आकर्षण फरक फरक अं गमा हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
पुरुषले महिलाको अनुहार, व/क्षस्थल, ना-इटो, कम्मर, आँखा, ओ ठ, हि’प लगायतका ७ अं ग बढी मन पार्छन् भने महिलाले पुरुषको सर्लक्क परेको पे ट, चौडा छाती, पाखुरा, ओठ र आँखा मन पार्छन् ।
महिलालाई पुरुषको व्यक्तित्वले आकर्षित गर्छ भने पुरुषले बाहिरी राम्रोलाई बढी ध्यान दिन्छन् । तर आकर्षित गर्ने कुरा हरेक व्यक्तिको रुची र चाहनामा केहि फरक हुनसक्छ ।
यो पनि- २ बर्षदेखि प्रेममा इन्दिरा जोशी, को हुन उनका प्रेमी ?
कतिपय सेलिब्रेटी आफ्नो प्रेम सम्बन्ध लु-काएरै राख्न रुचाउँछन्। तर सामाजिक सञ्जालमा प्रेम सम्बन्ध खुलाउने सेलिब्रेटीको कमी छैन।
हालै गायिका ईन्दिरा जोशीले फेसबुकमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे खुलेकी छन्। उनले आफू दुई वर्षदेखि प्रेम-सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी हुन्।
गायिका इन्दिरा जोशीले केही समय अगाडि कुरा गर्दै आफू प्रेममा नरहेको र बिहेको बिषयमा नसोचेको बताएकी थिइन् । तरपनि केही महिना अगाडि इन्दिराले प्रेममा नरहेको बताएपनि उनी २ बर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ ।
इन्दिरा आफैले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै २ बर्षदेखि आफू प्रेममा रहेको खुलाएकी छिन् । इन्दिराले लेखेकी छिन्–‘उनले मलाई म तिम्रो स्टार र तिमी मेरो चन्द्रमा भन्छन् । हामी २ बर्षदेखि एकसाथ छौं र अझै कैयौ बर्ष एकसाथ अगाडि बढ्ने वाचा गरेका छौं । जिन्दगीको अन्तिम श्वास रहेसम्म हामी एकसाथ हुनेछौं ।’
इन्दिरालाई उनका प्रेमीले मायामा वाचा गर्दै रिङ पनि लगाइदिएका छन् । इन्दिराले प्रेमीको तस्वीर भने सार्वजनिक गरेकी छैनन् । यसपछि उनका प्रशंसकहरूमा जिज्ञासा बढेको छ- को होलान् त गायिका ईन्दिरा जोशीको प्रेमी?